झुट फैलाउँदै कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मरेपछि स्वाव लिइएको झुटो दाबी, सूचना दिएको भन्दै दुल्लु अस्पताल प्रमुखलाई महाशाखा प्रमुखको धम्की – Enayanepal.com
झुट फैलाउँदै कर्णालीको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मरेपछि स्वाव लिइएको झुटो दाबी, सूचना दिएको भन्दै दुल्लु अस्पताल प्रमुखलाई महाशाखा प्रमुखको धम्की
दैलेखको दुल्लुस्थित किर्तीखम्बमा रहेको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका ३५ वर्षीय पूर्णबहादुर थापाको कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ तर कर्णाली प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. लक्ष्मी नारायण तिवारीले मृत्यू पछि स्वाव संकलन गरेको झुटो विवरण दिएका छन् ।
‘आज विहान उहाँको मृत्यू पछि हामीले स्वाव संकलन गरेका थियौं । तयो स्वाव जुम्ला पठायौं । दुइ घण्टामा पीसिआरको रिर्पोट आयो । उहाँको स्वाव जाँच्दा कोरोना पोजेटिभ आयो ।’ उनले भने, ‘हामीले गाडीमा स्वाव पठाएका हौं ।’ उनले न त गाडी नम्बर खुलाउन चाहे न त स्वाव संकलन गर्ने व्यक्तिको नाम दिन सके । ‘स्वास्थ्यकर्मीको नाम उल्लेख गर्न मिल्दैन ।’ उनले भने, ‘हामीले आजै स्वाव संकलन गरेर आजै रिर्पोट आएको हो । विज्ञप्ती सहि छ ।’ डा. तिवारीले दुल्लु अस्पताल प्रमुखलाई जानकारी नदिन धम्की समेत दिएका छन् । उनले सहि सूचना नदिन अस्पताल प्रमुख डा पूजा विसीलाई धम्की दिएका हुन ।
यता, क्वारेन्टाईनमा रहेकाहरुको हेरचाह गर्दै आएको दुल्लु अस्पतालले भने जेठ पन्ध्र गते मात्रै स्वाव संकलन गरिएको जनाएको छ । ‘दैलेख जिल्ला अस्पतालको समन्वयमा स्वास्थ्यकर्मीले जेठ पन्ध्र गते उनको स्वाव संकलन गरेका हुन ।’ उनले भनिन्, ‘त्यसको रिर्पोट आज मात्रै आएको हो । उहाँमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको छ ।’
दुल्लु नगरप्रमुख घनश्याम भण्डारीले १५ गते मात्रै उनको स्वाव संकलन गरिएको बताए । ‘कतिचोटी भनौं, १५ जेठमा मात्रै स्वाव लिएका छौं ।’ उनले भने ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा शनिवार गरिएको स्वाब परीक्षणमा मृत्यु भएका युवाको कोरोना रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाका डा. लक्ष्मीनारायण तिवारीले क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको पुष्टी गरे । उनकाअनुसार दुल्लु नगरपालिका–११ कालभैरव घर भएका ३५ वर्षीय युवा भारतको गुजरातबाट केही दिन अघि फर्किएका थिए ।
दुल्लु नगरपालिका–७ किर्तीखम्बस्थित रहेको क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका युवा उनी एक्कासी ढलेका थिए । ‘उनी भारतको गुजरात राज्यको अहमदावादमा रहेको एक होटलमा काम गर्दै आइरहेका थिए । हामीले उनलाई नगरपालिकाको पैसामा उद्धार गरि ल्याएका थियौं । उहाँलाई बचाउन सकिएन ।’ नगर प्रमुख घनश्याम भण्डारीले भने, ‘उनीसँगै क्वारेन्टाईनमा अब ७८ जना बसिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार मृतक युवाको एक छोरा र एक छोरी छन् । उनको पारिवारिक अवस्था मध्यम खालको भएको नगर प्रमुख भण्डारीको भनाई छ । ‘उहाँको मृत्यू भइसकेको छ । हामी कोरोनाको अन्तिम रिर्पोटको प्रतिक्षामा बसेका थियौं ।’ उनले भने, ‘नेपाली सेनाको सहयोगमा नगरपालिकाले उनको शवको व्यवस्थापन खाल्डो खनेर गर्नेछ । हामी ती युवाको शवको व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं । आजै हिन्दु धर्मअनुसार उनको अन्तिम दाहसंस्कार हुन्छ ।’ नगरप्रमुख भण्डारीले नगरपालिकाले हालसम्म २३ सय नागरिकलाई भारतबाट ल्याएको बताए । अस्पतालका प्रमुख डा. पुजा विसीले पोजेटिभ नै आएको बताईन । ‘मैले सूचना पाए अनुसार उहाँमा लक्षण केहि पनि थिएन । दुइ दिन अगाडी मात्रै स्वाव लिइएको थियो । विहान चिया र विस्कुट मात्रै खानु भएको हो । सवा आठ बजे मलाई खबर आएको थियो । हामी एक घण्टा ढिलो पुगेका थियौं । उहाँ जीवित नभएको ठानेर म मात्रै उहाँको नजिक गएँ ।’ डा. विसीले भनिन्, ‘विद्युतको भवनको बीचमा एक कोठामा मात्रै उहाँ बसिरहनु भएको थियो । कोठा सिंगल थियो । अन्य दुइ जना मात्रै उहाँसँग बसिरहेका थिए । सानो भवनमा भएका कारण धेरैको जाँच गर्न नपर्ने हाम्रो अनुमान छ । ती दुइ जनाको स्वाव आगामी दुइ दिनमा फेरि जाँच गर्छौं ।’